Dagaal iyo dulmiyada - Youmo
Våld & orättvisor - somaliska
Meniiga hoose waxaad ka heleysaa qoraallo, sawirro iyo filimaan ku saabsan kufsiga iyo caddaalad darrada.
Dhibaateynta galmada la xiriirta waa marka uu qof sameeyo ama sheego shey la xiriira jirka ama galmada, islamarkaana qofka kale u arko xad gudub. Dhibaateynta galmada la xiriirta ma aha wax fiican. Waxay noqon kartaa fal dambiyeed.
Sawiro is-dabayaal: Ka ganacsiga dadka
Halkan waxa ku yaala sawiro is-dabayaal oo ku saabsan ka ganacsiga dadku wuu yahay iyo waxaad caawimo heli karto haddii adiga laguu geysto. Ka ganacasiga dadka oo sidoo kale loo yaqaano mukhalisnimada. Waa marka cid kaa faa’iidaysato ama ku isticamaasho si ay lacag kaaga sameeyaan. Tusaale ahaan waa dadka kugu khasba in aad iibiso galmo, u shaqayso ama iibiso maan-dooriye.